Tuniisiyaa - Howling Pixel
Tuniisiyaa biyya Afrikaa keessa jirtu.
Ballina 163,610 km²
Baayyina ummataa 10,982,754 (2014)
Tuuta'insa ummataa 63/km²
Koodii lakkoofsa bilbilaa +216
Aljeeriyaa biyya Afrikaa keessa jirtu.
Burkinaa Faasoo biyya Afrikaa keessa jirtu.
Chaad biyya Afrikaa keessa jirtu.
Gaanaa biyya Afrikaa keessa jirtu.
Giinii biyya Afrikaa keessa jirtu.
Ijiipti biyya Arabaa kan Kaaba Afrikaatti argamtu. Ijiiptii seena waggaa dheeraa kan qabduu yoo ta'u piiraamidiidhaan baayyee beekkamti.
Jibuutiin biyya Gaanfa Afrikaatti argamtu yoo taatu maqaa guutuu Rippabiliika Jibuutii jedhamti.
Keeniyaan biyya Afrikaa Bahaatti argamtu yoo taatu Riippabilikii Keeniyaa jedhamuun beekkamti.
Komoroos biyya Afrikaa keessa jirtu.
Laayibeeriyaa biyya Afrikaa keessa jirtu.
Maalaawwii biyya Afrikaa keessa jirtu.
Moozambiik biyya Afrikaa keessa jirtu.
Naayijeeriyaa biyya Afrikaa keessa jirtu.
Ruwaandaa biyya Afrikaa keessa jirtu.
Seraa Liyoon biyya Afrikaa keessa jirtu.
Somaaliyaan biyya Gaanfa Afrikaatti argamtu.
Sudaan biyyaa kaaba Afrikaatti argamtu yoo taatu akka biyya Arabaatti lakkaa'amti.
Yugaandaa biyya Afrikaa keessa jirtu.